Macaawimooyin loogu gargaarayo dadkii ku hanti-waayey fatahaadda wabiga oo Beledweyn la gaarsiiyey. – Radio Daljir
Oktoobar 14, 2012 3:41 g 0
Beledweyn, Oct 13 – Waxaa magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan la gaarsiiyey sahayo gargaar ah oo lagu taakulaynayo dadkii ku hoy iyo hanti-beelay daadad ka soo rogmaday fatahaad uu sameeyey wabiga Shabeelle ee gobolkaasi mara.
Gargaarka mucaawimo ee halkaasi la gaarsiiyey, ayaa iskugu dhafan hug, hoy, hunguri iyo daawooyin, kaasoo ka yimid dhawr hay’adood oo u badan kuwa gargaarada dedegga ah, iyadoo kuwo kalena ay ku sii foolleeyihiin Beledweyn sida Radio Daljir ay u sheegeen ilo-wareeddo kala duwani.
Guddoomiye kuxigeen arrimaha waaxda arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Hiiraan Maxamed Macalin Yuusuf ‘Garabey’, ayaa waraysi uu siiyey Radio Daljir waxaa uu ku sheegay gargaarka macaawimo ee yimid in uusan ku filayn baahida dadka daadadka ku barakacay.
Guddoomiyuhu, waxaa uu tilmamay in loo baahan yahay wali sahay gargaar oo intaasi kasii badan, looguna cawl-celiyo shacabka ku cayrtoobay biyihii ka soo rogmaday karkaarro jabintii wabiga.